Ama-Internet Ministries - Izintshumayelo
Amasonto kaKristu e-United States
Amasonto kaKristu Emhlabeni Wonke
Amasonto kaKristu Online
Bhalisa i-New Church Profile
Buyekeza iphrofayli yeSonto ekhona
University of Michigan - Abafundi kuKristu
Cross Campus Ministries - I-Sunset Church kaKristu
I-Texas A & M University - Aggies For Christ
Ukufuna iNdlela YeNkosi
I-International Gospel Hour
I-Network Broadcasting Network
Ikholi YebuKristu BamaTestamente Elisha
I-Agape Bible Studies Online
I-JM Bible iyasiza
I-World Bible School
Isitolo seSitolo se-Mars Hill
The Chronicle Christian
I-E-Bible Class Class Teacher
I-Herald of Truth
Inethiwekhi Yokusakaza Okuphuthumayo
Izinhlangano Zokusiza Eziphuthumayo Eziphuthumayo
Amasonto eqembu likaKhristu lokuHlola Izinhlekelele
Amasonto kaKristu Inhlekelele Yokusiza Inhlekelele Inc
Insizakalo Yokusiza Izinhlekelele
USilbano Garcia, II.
Izintshumayelo zabanye abaVangeli
Sakha amawebhusayithi amasonto
Ukuklama Iwebhusayithi nokuHamba
Umklamo wohlelo lokusebenza lweselula
Ngena ngemvume ku-Directory Yakho Yomlando
Siyabonga ngokuvakashela ikhasi lethu le-Sermons ekhasini. Kwangathi ungakhuthazwa njengoba ulalela umlayezo ovela eZwini likaNkulunkulu. Izintshumayelo zethu ze-intanethi zizosiza wonke amaKristu kanye nalabo abafuna ukwazi okwengeziwe ngeNkosi. Sihlanganise uhlu lwabantu emhlabeni jikelele lwezintshumayelo ze-intanethi ezivela kubamemezeli abaningi bevangeli bevangeli.
KuMenyu Eyinhloko okubalwe ngenhla ungachofoza kunoma yiziphi izixhumanisi ezitholakala kuthebhu yezintshumayelo ukuze ufinyelele izintshumayelo zethu ze-intanethi.
Kuyinto injabulo nesibusiso ukukhonza amasonto kaKristu kanye nezwe eliku-intanethi ngezindaba ezinhle zikaJesu Kristu iNkosi. Sibheke phambili ukukukhonza. Kwangathi umusa kaNkulunkulu, uthando lukaJesu, nokuthula koMoya oNgcwele makube nawe nomndeni wakho kuze kube phakade.
Isonto lakho noma inkonzo yakho idinga iwebhusayithi?
Singasiza. I-Website yethu Builder yethu ku-intanethi kulula ukuyisebenzisa futhi ikhululekile ukuyisebenzisa nanoma yimiphi izinhlelo zethu zokubamba iwebhu ezikhokhelwayo. Uma sidinga singakwazi ukuklama iwebhusayithi yezobuchwepheshe ngezindleko eziphansi. Chofoza lapha noma kwi-Website logo ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Ubani ingabe amabandla kaKristu?
Kuyini ukukhala okuhlukile kwebandla likaKristu?
Isizinda somlando seMbukiso Wokubuyisela
Mangaki amasonto kaKristu akhona?
Amasonto axhunyiwe kanjani?
Amabandla kaKristu alawulwa kanjani?
Isonto likaKristu likholelwa ngani ngeBhayibheli?
Amalungu emabandla kaKristu akholelwa ekuzalweni kwentombi?
Ingabe ibandla likaKristu likholelwa ekunqunyweni ngaphambili?
Kungani ibandla likaKristu libhapathiza kuphela ngokucwiliswa?
Ingabe ubhapathizo lwangane lwenziwa?
Ingabe izikhonzi zesonto zizwa ukuvuma?
Ingabe imithandazo iqondiswa kwabangcwele?
Kudliwa isidlo seNkosi kaningi kangakanani?
Luhlobo luni lomculo olusetshenziswa ekukhulekeleni?
Ingabe ibandla likaKristu likholwa ezulwini nasesihogweni?
Ingabe ibandla likaKristu likholelwa ekuhlanzweni?
Ngabe isonto livikeleka kanjani ukwesekwa kwezezimali?
Ingabe ibandla likaKristu linokholo?
Umuntu uba kanjani ilungu lebandla likaKristu?
I-PO Box 146
Spearman, eTexas 79081
Ukubuka kuqala kwe-Pulpit
Thola Ukwazi Us
Usizo: Indlela Yokuvuselela Iphrofayli YeSonto ekhona
Usizo: Indlela Yokwakha Iphrofayli Entsha YeSonto
I-Solar Mission ePhilippines
I-Copyright © 1995 - 2020 Internet Ministries. Inkonzo yamabandla kaKristu. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Qinisekisa Ikheli le-Imeyili *
Qinisekisa Iphasiwedi *
Ikhodi yokuphepha; *
Izinsimu ezimakwe nge-asterisk (*) ziyadingeka.